Taliska Booliska oo Magaalada Muqdisho ku soo bandhigay lix nin | Dhacdo
Home Wararka Maanta Taliska Booliska oo Magaalada Muqdisho ku soo bandhigay lix nin
Taliska Booliska oo Magaalada Muqdisho ku soo bandhigay lix nin
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa caawa lix nin oo loo haysto falal burcadnimo ah ku soo bandhigay Magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Dhamme Sadiiq Aadan Cali (Doodisho) oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in raggani lagu soo qabtay hawlgalo ay sameeyeen ciidamada amniga.
Afhayeenka ayaa tilmaamay in lixdaasi nin ay siyaabooyin kala duwan dhac uga gaysteen Magaalada Muqdisho, laguna soo qabto hawlgalo lagu baadigoobayay.
“27-ka bisha June 2021 ayaa burcad wadata mooto bajaaj waxa ay soona Tarabuun dhac ugu gaysteen muwaadin Soomaaliyeed, muwaadinka waxa uu ashtakadiisa ku soo gudbiyay numbar-ka gaaban, ee ay Ciidanka Boolisku isticmaalaan ee 991, waxaana Ciidanka Booliska oo hawlgalo sameeyay ay durba gacanta ku soo dhigeen burcaddii iyo caddeymihii ay wateen.” Ayuu yiri Afhayeenku.
Waxa kaloo uu yiri “29-ka June burcad kale ayaa waxa ay dhac ugu gaysteen qof muwaadin ah Irridda Isbitaal Shaafi ee Magaalada Muqdisho, halkaasi oo muwaadinkii dhac loogu gaystay uu ashtakadiisa ku soo gudbistay numbarka gaaban ee 991, isla-markaana ay ciidanka gacanta ku soo dhigeen eedeysanihii, mooto bajaajtii uu watay iyo caddeymihii uu qaatay.”
Doodisho ayaa yiri “Shalay laba dhallinyaro ah oo ku hubeysan bastoolad, waxa ay dhac u gaysteen Carwo lagu gado Moobeelada oo la yiraado Carwo Kaah, kuwaasi oo goobta ka qaatay 19 teleefon oo 15 ka mid ah ay yihiin iPhone. Iskaashi dhex maray booliska iyo shacabka waxaa lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo mid ka mid ah eedeysane-yaasha oo ahaa kii dhibanaha ku qabtay bastooladda, halka kan kalena lagu raadjooggo oo saacadaha soo aaddan gacanta lagu soo dhigi doono.”
Doodisho ayaa intaa ku daray in burcad kale oo maanta dhac ka gaystay maqaaxida Ceynu Shamsi ee ku taala Isgoyska Al-baraka ee Degmada Hodan lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo. Dhammaan eedeysane-yaasha ayuu sheegay in loo horkeeni doono sharciga.
Previous articleRa’iisal Wasaaraha Somaliya oo la kulmay Safiirka Kenya
Next articleShabaab oo siyaabooyin kala duwan fagaare ugu toogtay 24 qof